စံပယ်ပန်း: ကိုယ်(သို့)သူ ဘယ်လိုလူလဲ..တဲ့..။
အင်ဂျင်နှီယာဖိုရမ်က ယူထားတာ..။ ကိုယ်ဘယ်လိုလူလဲသိချင်လို့ ရှာဖတ်ထားတာ..။ အရမ်းကြီးမမှန်တောင် အမှားကြီးမဟုတ်ဘူးပဲ..။ လက်ခံလို့ရတယ်..။ အပျင်းပြေဖတ်ကြည့်သွားပါလား..။ ကိုယ်ဘယ်လိုလူလဲဆိုတာသိရသလို၊ သူဘယ်လိုလူလဲဆိုတာ မှန်းနိုင်တာပေါ့..။
>A = သင်ဟာ အင်မတန် အေးတဲ.သူဖြစ်သော်လည် သင်.စိတ်ထဲမှာ အကြံ တခုခုရှိတယ်
> B = သင်ဟာ သူစိမ်းတစ်ယောက်နဲ. ဆက်ဆံရတိုင်း အမြဲ သတိရှိတယ်
> C = သင်.မှာ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် စိတ်ဓါတ်အပြည်.ရှိတယ်
> D = သင်.ဟာ လူတယောက် ကို ယုံကြည်ဖို. အင်မတန် ခက်ခဲတယ်
> E = သင်.ဟာ အင်မတန် စိတ်ဝင်စား စရာ ကောင်းတဲ.သူပဲ
> F = သင်.မှာ ချစ်မွေး ပါတယ်
> G = သင်.ဟာ လူတွေ ကို အကဲခက်အရမ်းတော်တယ်
> H = သင်.မှာ ဆင်ခြင်တုံ တရား မရှိဘူး
> I = သင်.ဟာ အမြဲ တမ်း ပြုံးနေပြီး တပါးသူကိုလဲ ပျော်ရွင်စေတယ်
> J = သင်မှာ မနာလိုမရူစိတ် ရှိတယ်
> K = သင်မှာ စူးစမ်း စမ်းသပ် လိုစိတ် ရှိတယ်
> L = သင်ဟာ အချစ်ကို ကိုးကွယ်သူ
> M = အောင်မြင်မူ တွေ သင်အလွယ်တကူရတယ်
> N = သင်ဟာ အလုပ်မရှိရင် မနေတက်သူ ဒါပေမယ်. ရှိရင်လဲ ငြီးငြူတက်သူ
> O = သင်ဟာ အင်မတန် ပွင်.လင်း တဲ.သူ
> P = သင်ဟာ အင်မတန် ရည်မွန် ပြီး နားလည်မူ အပြည်.ရှိတယ်
> Q = သင် ဟာ သူတော်ကောင်းယောင်ဆောင်ထားတယ်
> R= သင်ဟာ လူမူရေး ကိစ္စ္စ္စ တွေမှာ မပါမဖြစ်
> S = သင်ဟာ သဘောထား ကြီးတယ်
> T = သင်.မှာ ကြီးမားတဲ. ရည်မှန်းချက်ရှိတယ်
> U = သင်.ကိုယ်သင် အားလုံး နဲ. ရင်ဘောင်တန်း နိုင်တယ်လို. မှတ်ယူထားတယ်
> V = သင်.ကိုယ်သင် အရမ်းချောတယ် ထင်ထားတယ်
> W = သင်ဟာ သင်အကြောင်းတွေကို သူများ ကို မပြောပြချင်ဘူး
> X = သင်ဟာ သူများ လမ်းပြ၊ ဆရာလုပ်တာမကြိုက်ဘူး
> Y = သင်.မှာ အခက်အခဲတွေ များကြီး ရှိတယ်၊ ရှိခဲ.တယ်
> Z= သင်ဟာ အမြဲ တမ်း တယောက်ယောက်နဲ. ရန်ဖြစ်နေရမှ ကျေနပ်တယ်။
>A=သင်ဟာ အင်မတန် အေးတဲ.သူဖြစ်သော်လည် သင်.စိတ်ထဲမှာ အကြံ တခုခုရှိတယ်
တစ်ခုမှမမှန်ဘူး..။ ဟား ဟား..။ အင်မတန်အေးဆိုတာ မမှန်ဘူးလို့ထင်တယ်..။ တခါတရံတော့ အေးအေးလေးနေပါတယ်..။ အောင်မြင်မှူတွေအလွယ်တကူရတယ်ဆိုတာ လူတိုင်းအတွက်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးနော်..။ မကြိုးစားပဲအောင်မြင်မှူဆိုတာ မရနိုင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်..။
Posted by ကြည်မြန်မာ at 8/22/2010 10:22:00 am